"စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသိသောသတိနှင့်သတိမရှိသောဆောင်ရွက်ချက်များ။ သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွဲပြားသလား" - Prause et al ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ကောက်နုတ်ချက်များ၊ ၂၀၁၅ - သင်၏ Brain On Porn
မေးခွန်းထုတ်စရာ & အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာရေး၏ဝေဖန်မှုများ; ဝါဒဖြန့်အပိုင်းပိုင်း Debunking
“ သိစိတ်နှင့်သတိမဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များ - သူတို့သည်အပြာစာပေအသုံးပြုမှုနှင့်ကွဲပြားသလား။ ” - Prause et al ကိုသုံးသပ်သည့်ကောက်နုတ်ချက်များ၊ ၂၀၁၅
မူရင်းလေ့လာမှုနှင့်လင့်ခ် - Emotion မသိနှင့် Non-သတိဆောင်ရွက်ချက်များ: သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူပြောင်းသလား? (2017)
comments: porn အသုံးပြုသူများအပေါ်ဒီ EEG လေ့လာမှု3နီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများထောက်ပြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာများအားလုံး3Prause EEG လေ့လာမှုများအမှန်တကယ် (မကြာခဏစွဲနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်ရသော) မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် desensitization သို့မဟုတ်လေ့တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒီဝေဖန်မှုရှင်းပြ (YBOP အမြဲအခိုင်အမာထားပြီးအတိအကျကဘာလဲ: ၏ဝေဖန်မှု: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " 2016) ။ မြောက်မြားစွာကတခြားသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသဘောတူ Prause et al ။ , 2015 အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
ဤအ3ကားအညွှန်းအောက်ကကောက်နှုတ်ချက်မှာတော့အောက်ပါနီကိုးလ် Prause EEG လေ့လာမှုများ (။ #8 Prause et al ဖြစ်ပါသည်, 2015) ညွှန်ပြ:
7 - Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; လိင်ဆက်ဆံဖက်များ၏နံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှ Sabatinelli, ဃနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Soc ။ Cogn ။ အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Neurosc ။ 2015, 10, 93-100 ။
8 - Prause, N ကို .; သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Sabatinelli, D ကို .; Hajcak "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ G. အ Modulation ။ Biol ။ Psychol ။ 2015, 109, 192-199 ။
14 - သံမဏိ, VR; Staley, C ကို .; Fong သည်, T က .; Prause, N. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, မ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffect ။ neuroscience ။ Psychol ။ 2013, 3, 20770
ဖော်ပြကောက်နှုတ်ချက် Prause et al။ , 2015:
အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERPs) မကြာခဏ [ဥပမာ, စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဇီဝကမ္မအတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြ24] ။ ERP data တွေကိုအသုံးချဖို့လေ့လာရေးထိုကဲ့သို့သော P300 အဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာ ERP သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့  နှင့်နှောင်းပိုင်း-အပြုသဘောဆောင်သောနိုင်သည့်အလားအလာ, (LPP) [7, 8] ညစ်ညမ်းရှုမြင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အခါ။ အဆိုပါ ERP waveform ဤနောက်ပိုင်းတွင်ရှုထောင့် [ဤကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ် (P300) အဖြစ်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များမှစွပ်စွဲခဲ့ကြ25] အဖြစ်စိတ်ခံစားမှု-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (LPP) ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် . သံမဏိ et al ။  ကြားနေပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကြည့်ရှုအကြားမြင်ပြီကြီးမား P300 ကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတငျပွခဲ့သနှင့်သင်တန်းသားများကို '' hypersexuality မသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီအနုတ်လက္ခဏာတွေ့ရှိချက်ကြောင့်ပါဝင်သူရေကူးကန်မှမဆိုဝတ္ထုအရေးပါမှုရှိခြင်းမဟုတ်ပြထားတဲ့ပုံရိပ်တွေဆုံးဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအကြံပြု, သင်တန်းသားများအဖြစ်အားလုံးအကျိုးဆက်ကတော့ P300 အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖိနှိပ်မှုမှဦးဆောင်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းမြင့်မား volumes ကိုကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကအညွှန်းကိန်းလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်စဉ်များမှပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်စာရေးဆရာများဖြစ်ကောင်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ် LPP မှာရှာဖွေနေကြောင်းအကြံပြုအပေါ် သွား. , တစ်ဦးထက်ပိုအသုံးဝင်သော tool ကိုပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါ LPP အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာရေးညစ်ညမ်းပစ္စည်းကသူတို့ကြည့်ထိန်းညှိပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်ဖြစ်ဖို့ LPP လွှဲခွင်ကိုပြသကြ [7, 8]. မြောက်မြားစွာသည်အခြားစွဲ-related လေ့လာမှုများတစ် cue-related စိတ်လှုပ်ရှားမှုတာဝန်နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါပြသကဲ့သို့ဤရလဒ်ကသူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်စွဲ-inducing ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့ရဲ့စှဲလေ့ပိုကြီး LPP waveforms ပြတင်ဆက်သည့်အခါပုံရိပ်တွေညှိနှိုင်းပြဿနာများရှိခြင်းသတင်းပို့တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ, မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ် . Prause et al ။ [7, 8] ညစ်ညမ်းပစ္စည်းသုံးရင်သတင်းပို့လေ့လာမှုရှိသူတို့တက်ရောက်လာသူများကိုညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုသုံးစွဲနာရီပမာဏကိုသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကြောင့်တစ်ဦးလေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းအားဖြင့်သေးငယ် LPP ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေမည်အဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းမှုအကြံပြုချက်များ ။
လေ့လာရေးတသမတ်တည်းမကြာခဏညစ်ညမ်းပစ္စည်းထုတ်ရှာသောသူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကြောင့်အစာစားချင်စိတ်အကြောင်းအရာအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးဇီဝကမ္မ downregulation ပြခဲ့ကြ [3, 7, 8]. ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုလေ့လာတွေ့ရှိရလာဒ်များအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါစာရေးသူ '' ရန်တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်လေ့လာမှုများယဉ်ကျေးမှုကိုပြောင်းလဲဘို့အကောင့်တစ်ခုထက်ပိုသောကို up-to-date ဖြစ်အောင်စံချိန်စံညွှန်းမီ image ကိုဒေတာဘေ့စအသုံးချဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများလေ့လာမှုကာလအတွင်းသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု downregulated ။ ဤသည်ရှင်းပြချက်ကိုအနည်းဆုံး [အသုံးပြုသောခဲ့သည်7, 8] ငယ်များ LPP (နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာ) ကရည်ညွှန်းနေတဲ့ဆီးအတားမရှိချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုပြသရာ၎င်းတို့၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြရန်မထိန်းချုပ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ amplitude ။ LPP amplitude [ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ downregulation အပေါ်သို့လျော့ချဖို့ပြသပြီ62, 63] ။ ထို့ကြောင့်, ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေမှ LPP အနေနဲ့ဘယျလိုမှမက "ခေါ်ဆောင်သွား" ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းများအတွက်အကောင့်လိမ့်မည်။